လုပ်ကြပါအုန်း.. - MYSTERY ZILLION
November 2009 edited December 2009 in Network Accessories Sale
မနေ့ညက ကျွန်နော် ADSL ဆာဗာစက်မှာ freedom proxy software စမ်းရင်းနဲ့ IE မှာ proxy server setting ထဲမှာ proxy ထည့်လို့ မရတော့ဘူး..အင်...system restore လုပ်ပေမယ့်မရဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ IP star ရှိလို့တော်သေးတယ်.. Windows ပြန်တင်ရမှာလား...ကူညီကြပါ...အဆင်ပြေသွားရင် အ၀ကြိတ် ခိုင်းမယ်..
rshpongram wrote: »
Please repair window.:106::106:
အစ်ကိုရေ အစ်ကို ကွန်ပြူတာမှာ freedom ကိုပိတ်ပြီးမှာ IE မှာ၀င်ပြင်လိုက်လေ။ ပြင်လို့မရရင် ကွန်ပြူတာကို Reboot ပြန်လုပ်ပြီးမှ IE မှာ ပြန်ပြင်ကြည့်ပါလား။ ၀င်နေတုန်းဆိုရင်တော့ IE ကို Uninstall လုပ်ပြီး အသစ်ပြင်တင်ကြည့်လိုက်နော်။
Window တင်ဖို့လောက်အထိမလိုလုပ်ဘူးလို့ ညီတော့ထင်တယ်။
ဟိုအစ်ကိုတွေပြောသလို မရရင် ခွေးလွှတ်နော်။ နောက်တာ ခွှင့်လွှတ်လို့။ :P:P:P
လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ မရဘူး..အဲလို မရလို့ system restore တောင် လုပ်လိုက်တယ် ..ဒါတောင်မရဘူး.
ko zey yar win see mar windows xp sp3ghost cd shit teadar ka windows xp sp3ko 12 minutesatwin marapin tin pay te insein ka modern internet cafe mar shit te 01642516